Maqaalka Andre Oentoro ee Martech Zone |
Maqaallada by Andre Oentoro
Andre Oentoro waa aasaasaha Kibis -dhaaf, Shirkada fiidiyowga sharraxa abaalmarinta ku guuleysatay. Wuxuu ka caawiyaa ganacsiga inuu kordhiyo sicirka beddelashada, xiro iibsiyo badan iyo inuu ROI wax ku ool ah ka helo fiidiyeyaasha sharraxayaasha ah (siday u kala horreeyaan).
Arbacada, Oktoobar 9, 2019 Arbacada, Oktoobar 9, 2019 Andre Oentoro
Waxaa laga yaabaa inaad ka maqashay geed canab in fiidiyowyadu ay yihiin maalgashi qiimo leh ganacsi kasta oo doonaya inuu hagaajiyo joogitaankooda internetka. Muuqaaladani waxay ku fiican yihiin kordhinta qiimaha beddelaadda maxaa yeelay waxay ku fiican yihiin ka qayb qaadashada dhagaystayaasha iyo gudbinta farriimaha isku dhafan si wax ku ool ah - waa maxay jacaylka Marka, waxaad la yaaban tahay sidee baad u bilaabi kartaa ololahaaga suuqgeynta fiidiyowga? Ololaha suuqgeynta fiidiyowga wuxuu umuuqan karaa mashruuc aad u weyn oo ma ogid waxa